KARADYADA MILADYADA MILADY: MILICSI, SHARAXAAD KALA DUWAN, SAWIRRO - BEER CAGAARAN
Quruxda beerta - "Milady" baradho: sifooyinka, sharaxaada kala duwan, sawir
Milady ama Melody waa noocyo kala duwan oo ah taranka Holland oo ku baahsan beeraleyda hiwaayadda ee gobolada kala duwan.
Baradhadu ma dhicin, muddo dhowr sano ah iyada oo aan u baahnayn cusboonaysiinta maadooyinka abuurka. Dhadhanka digriiga qaan gaadhka ah waa la safeeyey, jilicsan oo iftiin leh, ku habboon noocyo kala duwan oo suxuun.
Baradiyaha Milady: Milixda kala duwan
digriiga waa weyn yihiin, miisaankoodu yahay 96 illaa 179 g;
wareega ama qaabka wareegsan;
xididka khudradda cagaaran, qurux badan, miisaankoodu yahay miisaanka iyo cabbirka;
diirka waa mid hurdi ah, labis, dhuuban;
indhaha oo muuqaal ah, yar, oo aan la ogaan karin;
saxarka ku saabsan gooyuhu waa jaale huruud ah ama kareem;
celceliska macmacaanka celceliska inta u dhaxaysa 11 ilaa 17%;
maadada sare ee borotiinka, cusbada macdanta, fitamiinada kooxda B, kartotin.
Mucaarid kala duwan ayaa loola jeedaa miiska dhexe. Baradhadu aad bay u fiican yihiin, laga bilaabo 1 hektar ayaa laga soo ururin karaa 176 ilaa 335 sentimitir. Waxsoosaarka ugu sareeya ee la diiwaangeliyey waa 636 sentimitir hektar.
In miiska waxaad arki kartaa dhalidda ee noocyo kale oo baradho hore:
Milady Laga soo bilaabo 1 hektar oo laga helo 176 illaa 335 cent.
Juvel Laga soo bilaabo 1 hektar waxaad ka qaadan kartaa in ka badan 700 oo lab ah.
Meteor 200 - 400 oo hektar ah halkii hektar, taas oo ku xidhan gobolka iyo cimilada.
Afar maalmood Laga soo bilaabo 1 hektar waxaa laga soo qaadan karaa 200 ilaa 300 quintals.
Minerva Laga soo bilaabo 1 hektar wuxuu ka soo qaataa 200 ilaa 450 oo mitir.
Karatop Waxaad haadi kartaa 200-500 oo mitir hektar.
Veneta Tirada celceliska celceliska waa 300 oo mitir halkii hektar.
Zhukovsky hore Celcelis ahaan 400 oo mitir hektar ah.
Riviera Laga soo bilaabo 280 ilaa 450 oo hektar ah.
Kiranda Laga soo bilaabo 110 ilaa 320 oo hektar ah.
Digriiga waa wax yar waxyeello marka qashin, inkastoo maqaarka khafiif ah. Baradhada la goostay si fiican ayaa loo kaydiyaa, iyada oo aan laga badinin guryaha ganacsiga. Gaadiid waa suurtagal. Akhriso wax badan oo ku saabsan shuruudaha iyo heerkulka kaydinta, ku saabsan shuruudaha loo abuuray taas oo ku jirta dukaanka khudradda, dhibaatooyinka suurtagalka ah. Iyo sidoo kale ku saabsan sida loo kaydiyo baradho xilliga jiilaalka, aqalka ama miiska, on balakoonka iyo sanduuqyada, qaboojiyaha iyo diiray.
Burburka waa mid isdhaafsan, dhexdhexaad ah, oo aan aad u faafin. Iyadoo ku xiran nooca, waxay noqon kartaa mid qumman ama qumman. Habdhiska cagaaran waa dhexdhexaad.
Caleemaha waa cagaar madow, nooca dhexe ah, oo leh geeso yar yar. Caleemo cad ama caato ah ayaa lagu ururiyaa qoryaha iswada leh. Dhismaha Berry waa mid hooseeya. Nidaamka asaasiga ah si fiican ayaa loo horumariyaa., baadiyaha wuxuu siinayaa 10-15 digriiga la soo doortay. Qadarka alaabooyinka aan tartan lahayn waa mid aad u yar.
Heerka daryeelka beeraha. Kala duwanaanshuhu waa mid xasaasi u ah waraabinta iyo quudinta, carrada iftiinka ah ayaa loo baahan yahay oo ku saleysan carrada madow ama ciid. In baradho culus koraan si liidata, digriiga waxay noqdaan kuwo qulqulaya. Daaweynta pre-daaweynta ee digriiga.
Kala duwan ayaa ku filan in ay u adkaystaan ​​cudurada ugu muhiimsan: kansarka baradhada, nematode dahab dahabka ah, maasaarada viral. Inkastoo da 'yaraashii hore, bataatadu waxay u nugul yahiin waxyeellada ugu dambeeysay ee digriiga iyo caleemaha.
Dhadhanka baradho waa mid aad u fiican: buuxa, isku dheelitiran, jilicsan. Khudaarta cagaaran waxay si fiican u karkaraan, laakin cunto karinta ku habboon waxay haysan kartaa qaab wanaagsan.
Baradhadu waa la kariyaa, shiili, kareemo ama dubi, ma madoobaan xilliga goynta iyo karinta. Laga soo bilaabo digriiga waxay u beddelaysaa midho cad oo ah midab qurux leh. Barafku waa nafaqo, laakiin ma aha mid aad u sareeya ee kalooriyeyaashu, waxay ku habboon tahay ilmaha ama cuntada cuntada.
Milixda kala duwan ee baradhada Miladyada waxaa la gooyaa caleemaha Dutchka. Darajada waxaa la keenay diiwaanka Gobolka ee Federaalka Ruushka, oo loogu talagalay gobolka Bartamaha.
Beeritaan lagu taliyay beeraha iyo beeraha yaryar ee shakhsi ahaaneed, oo laga yaabo inay ku beeraan goobaha warshadaha. Qumman, digriiga caanuhu waa u fiican yihiin iibka.
Awoodda kaydinta waxay gaartay 95%, inta lagu guda jiro kaydinta, digriiga waxay hayaan dhamaan sifooyinka nafaqada iyo muuqaalka muuqaalka.
Sawirku wuxuu muujinayaa kala duwanaanta baradhada Milady ee Milady:
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan waxaa ka mid ah:
dhadhanka fiican ee dalagyada xididada;
Goynta si fiican loo kaydiyey;
muuqaalka quruxda ee digriiga, iyaga oo ka dhigaya kuwo ku habboon iibka;
dulqaadka cimilada ee cimilada;
Waxaa jira ficillada aan lahayn cilladaha kala duwan. Tilmaamaha waxaa ka mid ah dareen diidmo ah waraabka iyo bacariminta, si weyn u kordhiya dhalidda.
Baradhadu waxay jecel yihiin carro fudud, nafaqo leh. Qiimaha nafaqada ee weyn, waxaa lagula talinayaa in lagu daro qoryaha qoryaha iyo qoryaha, sida caadiga ah bjørk, carrada.
Wixii beeridda, xitaa dalagyada xididka ah ee aan ka yareyn ukumaha digaaga ayaa la doortaa. Qalabka aan ganacsiga ahayn ee dalabku ma'aha mid ku haboon. Ka hor inta beerto, digriiga waa la kariyaa oo laga baaraandegaa kor uqaade koraya.
Waxaad Gari kartaa baradhada iftiinka ama balka qoyan. Haddii wax beerto ay yar tahay, baradho waa la googooyaa indhaha.
Beerto waxaa la fuliyaa marka ciidda u kulushahay 10-12 digrii. In ciidda qabow, digriiga waa qudhmi karaa. Xididada waxaa lagu dhejiyaa meel fog oo ah 30-35 cm midba midka kale oo isku dhejisan oo ah 60-70 cm.Dhulku waa yar yahay, wax ka badan 10-12 cm.
Inta lagu jiro xiliga aad u baahan tahay ugu yaraan 2 jeer si aad u cantoobo soo degitaanka, sameyska kabaha sare. Waxaad isticmaali kartaa habka manhajka iyo qalabka la adeegsado. In xagaaga qallalan, waxaa lagu talinayaa in la diyaariyo waraabka drip, si weyn u kordhin tayada ganacsiga ee digriiga.
Haddii aysan suurtagal ahayn, waxaa suurtogal ah in lagu waraabiyo beeraha 2-3 jeer, oo qallajinaya ciidda 40-50 cm Si loo ilaaliyo heerarka caadiga ah ee qoyaanka iyo ka ilaalinta haramaha, waxaa lagu talinayaa in la gooyo ciidda cawska ama jarjar cawska.
Baradhadu waxay u nugul yihiin quudinta. Waxaa lagula talinayaa in dhismayaasha macdanta ah ee la beddelo ku salaysan potassium ay ku jiraan arrin bakeeriga ah: Doodwanaag ama qoryaha lagu daro. Ku filan 2 xidid qurux leh xilli kasta.
Mishiinka waxtarka leh iyo foliar la xoojiyey xal aqueous of superphosphate, la qaaday 10 maalmood ka hor qodayaa.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo quudiyo baradho, goorta iyo sida loo dalbado Bacriminta iyo kuwa ay yihiin kuwa ugu fiican, sida ugu habboon ee loo quudiyo.
Toddobaadkii hore ka hor goosashada waxaa lagula talinayaa inay jaraan dushooda. Dalagyada laga soo saari doono abuurka waa in hore loo qoraa. Waa inay noqdaan kuwo xoog leh oo xoog leh, oo aan ku dhicin cayayaanka.
Baradho la kariyay ayaa lagu qalajiyey xuduudda ama hoosteeda, kala soocay iyo ku nadiifi meel qabow mugdi ah. Abuurka la xushay waxaa loo kaydiyaa si gooni ah.
Kala sooc u adkaysata cuduro badan oo halis ah: kansarka baradhada, nematode dahab dahab ah, fayrasyo ​​kala duwan: Alternaria, Fusarium, Verticilliasis, qolof. Wixii ka hortagga dhirbalka goor dambe, daaweyn keliya oo lagu beerto oo leh daawooyinka bakteeriyadu ku jirto ayaa lagula talinayaa.
Waxay ka caawisaa iyo degaannada isbeddelka joogtada ah ee degitaanka. Baradku wuxuu dareemayaa ugu fiican ee beeraha ku dhex jira qashinka, cowska cagaaran, kaabajka ama dabocase saliidda.
Baradhada cagaaran ee cagaaran waxay soo jiidataa lamaanaha Colorado baradho, iyo wireworms, dhirta, aboorka baradhada ayaa sidoo kale inta badan lagu hanjiyaa by beeritaanka. Si looga hortago, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh udboodo, carrada carrada, ilaaliso heerka qoyaanka.
Haddii ay dhacdo dhaawacyo aad u daran, beeritaanka waxaa lagu daaweeyaa sunta cayayaanka. Labbiska hore ee digirta ee digriiga iyo ciidda daadinta leh jeermis dilayaasha ayaa badbaadinaya wireworm. Si loola dagaallamo Colorado iyo dirxiga, waxaad isticmaali kartaa labada daaweyn ee dadweynaha iyo kiimikada warshadaha: Aktara, Corado, Regent iyo Prestige.
Miladyadu waa baraf dhadhan fiican leh oo qurux badan oo ku habboon hiwaayadda ama beerista warshadaha. Cunsurka ugu weyn ee kala duwan ee baradho shiidan ee Miladyada Miladyadu waa wax soo saar. Waxa kale oo aan qabyo ahayn, ku habboon goobo cimilo oo kala duwan. Waxyaabaha abuurka ahi ma dhicin, waxaa laga soo ururin karaa sanadka illaa sanadka iyada oo loo eegayo dhulkeeda.
Waxaan sidoo kale u soo jeedinaynaa maqaalad taxane ah oo ku saabsan noocyo kala duwan oo baradho ah. Akhri tiknoolajiyadda casriga ah ee casriga ah iyo helitaanka goosashada wanaagsan iyada oo aan la jarin iyo hilling. La kulan hababka sii kordhaya cawska, bacaha, fiilooyinka, sanduuqyada. Soo ogow waddamada ay yihiin baradhoowga ugu ballaaran ee caleemaha iyo caleemaha caan ku ah dalka Ruushka, waa in shuruucda la raaco marka la beero noocyada hore.